Ogaden News Agency (ONA) – Bayaankii kasoo baxay shirwaynihii 10aad ee jaaliyadaha Pacifiga
Bayaankii kasoo baxay shirwaynihii 10aad ee jaaliyadaha Pacifiga
Waxaa ka qabsoomay inta u dhaxaysay 26/3/2016 ilaa 27/3/2016 magaalada perth ee galbeedka autraaliya shirwaynihii 10aad ee jaaliyadaha S.Ogaadeeniya ee Paacific-ga . Shirkan oo sanadala ah ayaa waxaa ka soo qayb galay ergooyin ka kala socday dhamaan jaaliyadaha ka hawlgala Pacific-ga. Waxaa shirka lagu lafa guray xaalada guud ee gode iyo dibadba ee dalka iyo dadka ogaadeeniya uu ku sugan yahay. Shirka oo ku soo aaday xaalado xasaasi ah ayaa waxaa looga dooday mustaqbalka dhow iyo kan fog ee Ogaadeeniya. Shirku wuxuu qodob qodob u dul istaagay hawlihii u qabsoomay sanadii tagaye jaaliyadaha S.Ogaadeeniya ee shirka kasoo qaybgalay iyo qorshaha loo dajiyay sanadka soo socda. Wuxuu kaloo qiimayn ku sameeyay xadgubka ba’an ee gumaysiga Itoopiya ku hayo shacabka Ogaadeeniya iyo sidii loogu banadhigi lahaa beesha caalamka.
Dhamaan qodobadii shirka la horkeenay ayaa go’aano dhaxagal ah laga gaadhay oo waxtari doona halganka shacabka Ogadenya uu ku raadinayo xoriyadiisa.
Shirku wuxuu bogaadinayaa naftood hurayaasha CWXO ee jiida hore u jooga soo celinta sharafta dadka iyo dalka Ogaadeeniya. Wuxuu sidoo kale shirku bogaadin iyo hambalyo u dirayaa shacabka mintidka ee gumaysi diidka ee S.Ogaadeeniya ee fashiliyay inuu gumaysiga u hirgalo damaciisa ku dhisan gunnimada.
Shirku wuxuu baaq u dirayaa dawladaha caalamka haydaha xuquuqu insaanka ururka OAU ururka jaacada carabta urur goboleedka IGAD inay soo faragaliyaan tacadige iyo gumaadka joogtada ee lagu hayso shacabka S.Ogaadeeniya.
Wuxuu shirka cambaareeyay heshiis beenaadkii ay dawladda Itobiya iyo Jabuuti iyo shirkadah Shiinaha ay ku kala saxiixdeen in shidaalka Ogadenya ay dhoofiyaan. Heshiiskaa ayuu shirka ku tilmaamay mid xaaraan ah oon suurtagal noqon doonin.